[OFFICIAL] dr.fone yamathuluzi --Android Data Isisuli: Sula ngokugcwele Konke ku-Android ne-Vikela Inqubomgomo Yakho
Zama It Mahhala
iOS Uhlelo Lokubuyisela
iOS Idatha Isipele nokubuyisela esimweni
iOS WhatsApp Dlulisa, Isipele nokubuyisela esimweni
iOS Viber Isipele nokubuyisela esimweni
iOS Kik Isipele nokubuyisela esimweni
iOS LINE Isipele nokubuyisela esimweni
iOS Okugcwele Idatha Isisuli
iOS Private Idatha Isisuli
Isevisi ye-Vula i-SIM
iOS Screen mibhalo
Android Lock Screen Ukususwa
Android Data Isizinda
Android Data Isipele nokubuyisela esimweni
Android Data nokusula
Android Screen mibhalo
Okuningi Ucingo Amathuluzi
MobileTrans Ucingo Dlulisa
MirrorGo Android mibhalo
dr.fone yamathuluzi --Android Data Isisuli
Sula ngokugcwele Konke ku-Android ne-Vikela Inqubomgomo Yakho
Simple, inqubo ukuyichofoza.
Sula Android yakho ngokuphelele futhi unomphela.
Sula izithombe, oxhumana nabo, imiyalezo, call izingodo kanye nazo zonke idatha yangasese.
Usekela wonke amadivaysi Android etholakala emakethe.
Uzame mahhala Thenga Manje
ukususwa Simple noma kabusha kwasefekthri akusho ukusula idatha Android unaphakade. Idatha isusiwe namanje kungenziwa zibuyiswe ngobuchwepheshe etholakalayo. Android Data Isisuli kuqinisekisa ukuthi ubumfihlo bakho iphephile ngokusula unaphakade amafayela asusiwe, ukusula ukuphequlula umlando, ukulondoloza kwesikhashana kanye nokuvikela ulwazi lwakho lomuntu siqu.
Ukuthengisa noma Ukupha Hambayo yakho Android?
Sebenzisa i-Android Data Isisuli ukuqothula idatha yakho siqu kuqala.
Bheka Zonke Izici
ukusula ngokugcwele konke efonini yakho ye-Android.
Ukuthengisa ifoni yakho esetshenziswa Android noma ithebhulethi? Sebenzisa dr.fone yamathuluzi --Android Data Isisuli ukusula unaphakade konke ku-Android yakho uphinde uvikele ubumfihlo bakho.
Ngokuphelele Sula ifoni Android ahlanzekile.
Traditional ukuhlela kabusha idatha yemboni akusho ukuhlanza idatha yakho siqu efonini 100%. Android Data Isisuli kukusiza Sula idivayisi ye-Android ehlanzekile ukuthole emuva kuzilungiselelo factory
Sula zonke izinhlobo idatha kwifoni Android.
Android Data Isisuli ikuvumela ukusula idatha yangasese, ezifana izithombe, imiyalezo, othintana, shayela izingodo, amanothi, amakhalenda, futhi idatha yohlelo lokusebenza, njll
Sula ifoni elidala Android ne uzivikele.
Ngamathuluzi afanele, ukususwa idatha kwifoni endala ye-Android namanje kungenziwa zibuyiswe. Futhi 1 aphume 10 uyisisulu ukwebiwa kwemininingwane emhlabeni. Vikela imininingwane yakho epheqelezu ngokucofa esesula kubo uhlanzeke wonke.
Sekela izinkulungwane kumadivayisi we-Android asebenzisa ehlukeneyo uhlelo Android.
Ngokuyinhloko yamathuluzi dr.fone --Android Data Isisuli isekela wonke amadivaysi Android etholakala emakethe. Kuyoba ukusekela ngaphezulu kanye amadivayisi amasha ayatholakala.
Sula Konke Tinhlobo Personal Data Android Yakho
Ungasebenzisa i-Android Data Isisuli ukusula zonke imininingwane eyimfihlo, kufaka phakathi izithombe, imiyalezo nezinamathiselo, oxhumana nabo, umlando call, amanothi, amakhalenda, izikhumbuzo futhi idatha yohlelo lokusebenza, njll ku-Android yakho unomphela.
Kungani Khetha dr.fone yamathuluzi
Simple, fast, futhi ngempumelelo.
idatha kusulwe ayikwazi ukutholwa yinoma yimuphi ithuluzi.
Ayikho idatha igcinwe noma leaked ngesikhathi senqubo.
interface enembile wonke umuntu ukuba alusebenzise.
Sekela Zonke Amadivayisi Android
Android Data Isisuli isekela wonke amadivaysi atholakalayo Android emakethe. Kungakhathaliseki une Samsung, HTC, Sony, Samsung, i-Google Nexus, LG, noma ZTE, njll futhi yini Android version efonini yakho iyasebenza, Android Data Isisuli kukusiza ukusula konke ocingweni unaphakade.
ingabe i-Android Data Isisuli Isebenza kanjani?
Android Data Isisuli kukusiza unikele idatha yakho belingafundeki ngokuphelele bese bahlanze lonke disk ngokuphelele. Khona-ke, abasebenzisi kumele ngesandla ukwenza ukusetha kabusha i-Afterword ifoni. Ngala imisebenzi emibili, idatha yakho ngeke bakwazi zibuyiswe yinoma ubani futhi.
Ingabe i-Android Data Isisuli ukusula ngokuphelele yonke idatha ocingweni?
Yebo, i-Android Data Isisuli ngokuphelele futhi unomphela ukuhlanza yonke idatha yomuntu siqu efonini, kuhlanganise nabo, imibiko, izithombe, call izingodo, amakhalenda, lokusebenza nedatha yohlelo lokusebenza, njll
Yini okufanele I sinake uma ngisebenzisa i-Android Data Isisuli?
Sicela musa unqamule ifoni noma ukuvula yimuphi omunye isofthiwe ukuphathwa Android ngesikhathi yonke inqubo. Futhi ekugcineni, ticondziso Android Data Isisuli ukwenza ukusetha kabusha ifoni yakho.
Yini amadivayisi we-Android enza Android Data Isisuli ukwesekwa?
Okwamanje i-Android Data Isisuli isekela wonke amadivaysi Android etholakala emakethe. Futhi ngeke ngokushesha ukusekela okwengeziwe amadivayisi amasha Android kanye zikhishwa.
" Wondershare dr.fone yamathuluzi-Android ine kulula ukuyisebenzisa interface ukuthi kungaba navigation abasebenzisi wonke amazinga ubuchwepheshe. Kuyinto engasindi futhi akasebenzisi semali system imithombo. Sekukonke, le kunalokho ewusizo tool ungakuphi ungase uphume besimo ambalwa okunamathelayo uma kuziwa yokutakula idatha idivayisi yakho ye-Android. Funda kabanzi >>
- Kusukela filehippo, a top-zibalwa software yezimanga ukuhlinzeka isofthiwe top-zibalwa kuphela.
dr.fone bahlanza Samsung yami S5 ngokuphelele ngaphandle kwezihibe. Manje ngingasho ukuthengisa ngaphandle ukukhathazeka mayelana ulwazi lwami.
umsebenzi gooood !!!
Android irabha idatha ngempela wasebenza kahle.
Ngaqale wayekungabaza. Kodwa dr.fone kuvela ukusebenza kahle. Nice!
Amathiphu & tips
Top 7 Android Data Isisuli Software Sula unaphakade Android yakho Old
Top 6 Android Idatha Susa izinhlelo zokusebenza ze-Vikela Inqubomgomo Yakho
Indlela Phinda Isuse Izithombe kusuka Samsung Galaxy / Note
Phinda Data kusuka Phones Samsung Mobile
Indlela Lungisa Samsung Galaxy Ukufa kungazelelwe: Black Screen Lokufa
Izindlela ezingu-2 Ingabe Samsung Data Recovery Unesizathu Ukwazi
Samsung Photo yokutakula
Indlela Phinda Isuse Imilayezo esuka Samsung Cell Hambayo
Indlela Engcono Kakhulu Phinda kokuqukethwe ususiwe kusuka Samsung Phones
Amakhasimende ethu Ingabe Futhi Ukulanda:
Android Data Isizinda (Kudivayisi esonakele)
idatha Rescue kusuka amafoni Android ngobugebengu kanye amaphilisi emizuzwini engu-5.
Susa isikrini ikhiyiwe kusuka Amadivayisi Android ngaphandle kokulahlekelwa idatha.
Khetha isipele idatha yakho ye-Android kukhompyutha futhi ulibuyise ngokwezidingo zakho.
Mac-Android Data Recovery
Lokhu kushintsha ulimi kwekhasi. Ngeke kushintshe noma imuphi umbhalo ofakwa abasebenzisi
Copyright 漏 Wondershare . Wonke Amalungelo Agodliwe.